Madaxweyne Faroole iyo musharixiinta oo maanta ku shirsan madaxtooyada Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 17, 2013 2:44 b 0
Garoowe, December 17, 2013 – Xaruunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe waxaa maanta ku shirsan musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo iyo madaxweynaha Puntland ee xiligan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, kuwaas oo ka wada-hadalaya arrimo dhowr ah.
Shirka dhexmaraya madaxweynaha iyo musharixiinta waxaa ka qayb-galaya dhamaan tartamayaa xilka madaxweynenimo iyo xilka madaxweyne ku xigeenka, waxaana la filayaa in la iskula soo qaado wax badan oo ay ugu horayso arrinta guddiga xalinta khilaafaadka iyo hanaanka doorashada.
Shirka oo haatan socda ayaa laga sugayaa inay ka soo baxdo natiijo iyo heshiis goor dambe oo maanta ah, madaxweynaha ayaa musharixiinta ku casumay madaxtooyada oo loogu qado kariyey.
?Waxaan filaynaa inaan dhamaanteen maanta kulano oo halkan ku shirno kuna wada qadanayno inay tahay mid farxad u ah dadka reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed intaba.? Ayuu yiri Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo furitaanka horudhaca ah ee shirka kula hadlay musharixiinta.
Tartamayaasha xilka madaxweynenimo ee Puntland ayaa iyana gudoomiye u doortay Gen. Cabdulaahi Siciid samatar, waxaa uu shirka ka sheegay in ay diyaar u yihiin in wax kasta xal lagu dhameeyo isla markaasna la iska dhowro khilaaf oo idil.
?doorashadan waxaan ka rajo qabnaa inay u dhacdo sida tii 2009, ahaato mid xasiloon nabadoon aan is qabqabsi lahayn, waxaan halkan ku nimid niyad sami, madaxweynaha iyo ku xigeenka ayaa laga rabaa inay dabecasanaan muujiyaan xiligan maadama ay iyagu talinayaan.? Ayuu yiri Gen. Samatar.
Isimada waa wayn ee Puntland ururrada bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku baaqay in la soo dedejiyo shirka musharixiinta iyo madaxweynaha oo loo arko in uu yahay mid wax badan lagu xalin karo, waxaa aad la isugu khilaafsan yahay arrinta guddiga ansixinta iyo xalita khilaafaadka ee Puntland.
Dhegeyso: – Madaxweyne Faroole oo musharixiinta kula hadlaya hoyga madaxtooyada